हाडजोर्नी र मेरुदण्डमा हुने ट्युमरहरु » नेपाल प्लस
● डा.कृष्ण प्रसाद पौडेल
फेब्रुअरी ४ लाई बिश्व क्यन्सर दिवसको रुपमा वर्षेनी मनाउने गरिन्छ । यो दिवस क्यान्सर सम्ब्न्धी जनचेतना फैलाउने, यसको रोकथाम्, रोगको पहिचान र उपचार सम्ब्न्धी जानकारी दिने उद्देश्यले महत्व राख्दछ । बिश्व क्यान्सर घोषणा अनुशार उद्देस्य ५ मा क्यान्सर सम्ब्न्धी सोचाइ र बुझाइ हटाउनुलाई मह्त्य दिइएको छ । ‘Debunk the Myths’ लाई गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मह्त्य दिइएको छ । क्यान्सर बारे कुरा गर्नु बेकार छ् । क्यान्सर को लक्ष्यण हुँदैन् । क्यान्सर भएपछी केहि गर्न सकिदैन आदी गलत सोचाइ लाई तुरुन्तै हामी मिलेर सबै आम नेपालीको सोचाईबाट दुर गर्नुपर्छ ।
अस्वभाविक र अप्राकृतिक किसिमबाट शरिरको कुनै कोष वा तन्तु बढ्नुलाई ट्युमर भनिन्छ । उसो त शरिरमा Tumor like growth (ट्युमर नभए पनि ट्युमर जस्तै देखिने) अरु पनि लक्षणहरु देखिन सक्छन् । शरिरमा कहिँ कतै यस्तै लक्षणहरु देखिएमा एकदमै आत्तिईहाल्नु पर्दैन । बरु सम्बन्धित चिकित्सकहरुलाई देखाउनुपर्छ ।
हाडजोर्नी प्रणालीमा हुने ट्युमरहरुलाई समग्रमा Muskuloskeletal ट्युमरहरु भनिन्छ । यि ट्युमरहरुलाई Benign र Malignant भनेर दुई किसिममा बाँडिन्छ । धेरैजसो ट्युमरहरु Benign हुन्छन् जसले धेरै समस्या गर्दैन । बेलैमा उपचार गरे मानिस पूर्णतया निको हुनसक्छ । Malignant ट्युमरहरु जसलाई सामान्यतया क्यान्सर भनिन्छ । जो थोरै मात्रामा हुन्छन् र यिनिहरुलाई बेलैमा जचाउनु पर्छ । संवन्धित ठाउँमा दुख्नु यि ट्युमरहरुको पहिलो लक्षण हुनसक्छ भने सुनिनु र बढ्दै जानु अर्को मुख्य लक्षण हो ।
Muskulosketetal ट्युमरहरु – यिनिहरुमा हुने मुख्य तन्तु (Tissue) हरु अनुसार वर्गीकरण गरिन्छ । Bony तन्तुबाट उत्पति हुने, Carrilage (कुरकुरे हड्डी) बाट उत्पति हुने र Fibrous Tissue बाट उत्पन्न हुने । यि प्रारम्भिक ट्युमरहरु हुन् भने हाडजोर्नीमा हुने मुख्य क्यान्सरहरु त अन्य ठाउँका क्यान्सरहरुबाट सर्ने Metastatic र हड्डीको रगतमासीबाट हुने क्यान्सर Myeloma हुन् । प्रारम्भिक ट्युमरहरु बढ्दो उमेर र वयस्कमा हुन्छन भने मध्यम वा त्यो भन्दा अलि विकशित (Secondary) ट्युमरहरु ढल्कँदो उमेरमा हुने गर्छन् ।
शरिरको माथिल्लो भाग देखि हात खुट्टाका टुप्पाका हाडहरुमा हुने ट्युमर र क्यान्सरहरुमा शरिरको अर्को भागबाट फैलिएर जाने क्यान्सर प्रमुख कारण हो (Secondary Tumor or Metastatic Tumor) । उसो त शरिरमा कुनै ठाउँको हड्डीहरु बढ्दैमा वा पलाउँदैमा ति सबै ट्युमर वा क्यान्सर हुँदैनन् । ति सामान्य प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् जसलाई उपचारकै पनि आवश्यकता पर्दैन, जस्तै Bone exotosis, Bone Cyst आदि । शरिरमा भएका २०५ वटा लामा, छोटा, चेप्टा हड्डीहरु मध्ये मेरुदण्डमा हुने हड्डीहरुमा शरिरको ५० प्रतिशत क्यान्सर हुने गर्छ । हाडजोर्नीको क्यान्सरहरुमा हातखुट्टामा हुने मुख्य क्यान्सरहरुमा Osteogenic Sarcoma प्रमुख हो । जुन मुख्यतः बढ्ने उमेरका केटा–केटीहरुलाई हुन सक्छ । हाडजोर्नीका अन्य प्रारम्भिक ट्युमरहरुमा Ewings Sarcoma, Chondro Sarcoma पर्दछन । मेरुदण्ड -Vertebral Column_ को क्यान्सरहरुमा चाँहि Secondary ट्युमरहरु (Or Metastatic Tumors) मुख्य हो । यो हुनुको कारण मानीसको शरिरमा हुने प्रमुख क्यान्सरहरु फोक्सो, पेट, प्रोस्टेट जस्ता अंगहरु मेरुदण्डको अघिल्लो भागमा रहन्छन् र रगतको बहावसंगै फैलिदै ठिक पछाडि रहेको मेरुदण्डमा ट्युमर कोषहरु पुग्ने गर्दछन् ।
मेरुदण्डमा हुने ट्युमरहरुले पैदा गर्ने मुख्य लक्षण ढाडको दुखाई हो । यसरी ढाड दुखाई लामो समय रह्यो र साधारण दबाईले सञ्चो भएन भने राम्ररी जचाउनु पर्छ । दुई किसिमका स्पाईनल ट्युमर हुन्छन् ।
१, मेरुदण्ड Vertebral Column ट्युमरहरुस्
प्रारम्भिक ट्युमरहरु बढी युवावस्थामा हुने गर्दछन् र विस्तारै बढ्दछन् । मेटास्टाटीक ट्युमरहरु छिटो बढ्दछन् । आराम गर्दा सञ्चो हुने, राती दुखेर सुत्नै गाह्रो हुने र दुब्लाउँदै जाने हुन जान्छ । महिलाहरुमा यि ट्युमरहरु फोक्सो र छाती -Breast_ बाट सर्न सक्छन् भने पुरुषहरुमा फोक्सो वा प्रोस्टेट ग्रन्थीबाट सर्दछ । यसमा ढाडको दुखाई तल्लो कम्मर भन्दा बिच भाग तिर बढि हुन जान्छ । ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण पनि हुन सक्छन ।
२, सुषुम्ना नाडी (Spinal Cord) का ट्युमरहरु
रोगको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा यसको निदान रोग के हो भनेर पहिचान गर्नु पहिला महत्वपूर्ण हुन्छ । Musculoskeletal ट्युमरहरुको निदानमा भरपर्दो तरिका बायोप्सी नै हो । यो रोगको निदान र उपचार दुबैको लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साथसाथै X-ray, CT Scan, MRI Scan र हाल आएर आधुनिक प्रविधिहरु PET Scan, / Bone Scan हरु आवश्यक हुन सक्छ ।
Malignant ट्युमरहरुको लागी रेडिओथेरापी (Radiotherapy) र केमोथेरापी Chemotherapy) हरुको आवश्यकता पर्दछ । हाडजोर्नीको ट्युमरहरुमा रेडिओथेरापी भन्दा केमोथेरापी कै महत्व हुन्छ । अपरेशन गर्नु भन्दा पहिला नै केमोथेरापी दिईन्छ जसलाई Neo- Adjuvant केमोथेरापी भनिन्छ । जसले ट्युमरको आकार घटाउँछ अनि अपरेशन गरेर फाल्न सजिलो हुन्छ । हातखुट्टाको ट्युमरहरुलाई काटेर फाल्न पर्न सक्छ । जे जस्तो भए पनि समयमै उपचार भएमा Benign ट्युमरहरुबाट मुक्त हुन सकिन्छ भने Malignant ट्युमरहरुको पनि असर कम गर्न सकिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ हाड–जोर्नी रोग विशेषज्ञ तथा नेपाल चिकित्सक संघ, चितवन शाखाका अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित मिति: February 4, 2014
राज्यलक्ष्मी गोल्छाले भनिन्, “4 जना छोरीहरु , अनि 1 जना छोरा ( जम्मा5जना छोराछोरीहरु ) हजुर” । भो , नेपालीहरुले त5ओटा छोराछोरी त पांउदैन , हाम्रो बाउ आमाले , उहि बेलाको जमानामा पनि ३ वटा पाएको ( त्यतिबेला ३ वटा ठीक भन्थेयो रे सबैले ) । म सबभन्दा कान्छो हो ( मै पनि ३८ बर्ष भयो ) . अनि गोल्छा भनेको के जात ? किनभने यो नेपाली हैन.
डा साप लेख महत्वपुर्न छ तर नेपालीकरन गर्नु पर्यो, अंग्रेजी नबुझ्नेले के गर्ने ?
Jivan kumar Ale
Good article but too many english moxed, agree with himalji
मेरो हात बिगत 14 वर्ष अगाडि भाचिएको हो।
अहिले आएर जुन भाचिएको हात हो त्यो दुख्छ के भको होला
dr sab mero kammar dukher kam gar basna hidan dulna samasya vayako chha ke garne hola yo dukhnuko karan malai vande dekhi ra yesko upacharko barema malai email gardinu vaya dekhi ma aavari hune thiy